Guddiga Doorashooyinka oo diyaarinaya doorashada 4 kursi oo ka banaan Baarlamaanka – Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka oo diyaarinaya doorashada 4 kursi oo ka banaan Baarlamaanka
Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay inuu isu diyaarinayo qabashada doorashada xildhibaankii beddeli lahaa kursigii uu ka geeriyooday, Allaha u naxariistee, Xildhibaan hore Cismaan Cilmi Boqorre. Guddoomiyaha Guddigaas, Xaliima Ibraahin Ismaaciil (Xaliima Yarey), ayaa ku wargelisay beesha kursigaas in ay shuraadaha laga rabo kusoo buuxiyaan 7-aad gudihiis.
“Guddigu wuxuu ku dhawaaqayaa inuu qaban doono doorashada boos-buuxinta kursi ka banaan Golaha Shacabka ee ay deegaan-doorashadiisu tahay Gobolada Waqooyi, laguna qabto doorashadiisa Muqdisho” ayey Xaliima Yarey ku tiri warbahainta. Laakiin, ma sheegin waqtiga ay doorashadaas dhici doonto, waxayse xustay in deegaan-doorashada kursiga ay tahay Waqooyi, laakiin uu ka dhacayo Muqdisho, sababtana ma raacin.
“(Guddigu) wuxuu, sidoo kale, ku wargelinayaa odayaasha dhaqanka ee ku jiray liiska 135-tii oday-dhaqameed ee hogaanka u haya beesha Ciise Dalool Hoorane ee uu matalo kursiga uu ka geeriyooday, Allaha u naxariistee, Ex Xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre in ay u soo gudbiyaan Xafiiska Guddiga Doorashooyinka liiska 51-da ergo-doorasho” ayey tiri Xaliima.
“Sidoo kale, Guddiga Madax-banaan wuxuu ku wargelinayaa musharraxiinta u tartameysa kursigaan in qabashada araajida iyo diiwaan-gelinta ay bilaabaneyso 24-ka bishaan Maarso, 2019-ka, kuna eg 31 bisha Maarso, 2019-ka” ayey tiri Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliima Yarey.
Xaliima waxay sheegtay in qabashada doorashada 3 xildhibaan oo kale, oo ay metelaaddoodu ka maqan tahay Baarlamaanka, ay u xayiran tahay dhaqaalo la’aan, ayna qaban-qaabin doonaan marka ay u fududeyso Wasaaradda Maaliyadda, sida ay hadalka u dhigtay. “Waxaa kaloo noo yaala 3 kursi oo Koofur Galbeed ka soo jeedda, iyagana sida ugu dhaqsiyaha badanaa rabnaa inaan u qabano, markii ay noo soo fududaato hawlaha iyo arrimaha nooga xiran Wasaaradda Maaliyadda” ayey tiri Xaliima Yarey.
Doorashada golaha deegaanka Gaalkacyo oo loo badinayo in ay dib uga dhacayso wakhtigii hore ee loo qorsheeyay